Isbeddellada & raadinta maqaalada mawduuca:sayniska kombiyuutarka
Sida loo sameeyo goob deg deg ah goobta oo leh eray furaha Firefox
2021-05-11 Sayniska kombi...
Mozilla Firefox waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku kicin karto calaamado leh ereyga muhiimka ah ee cinwaanka cinwaanka. Astaantan iyo buug-gacmeed khaas ah, waxaad si dhakhso leh uga raadin kartaa bogga adoo isticmaalaya Google, Bing, ama DuckDuckGo. Waa tan sida. Awoodda Calaamadaha Calaamadaha waa a
Sida loo duubo shaashadda Mac
Duubista shaashadda ee Mac si weyn ayaa loogu hagaajiyay macOS Mojave (oo markii ugu horreysay la soo saaray 2018). Iyada oo aan mooyee wax kale lagu rakibin, waxaad ku qaban kartaa codka, dhagsiinta jiirka, qaybo ka mid ah shaashaddaada, iyo inbadan. Waa tan sida loo shaandheeyo duubista ku jirta M
Iibka xagaaga: Qiimaha aan laga adkaan karin ee Windows 10 Pro ee € 7.25, Office 2019 Pro ee € 25.20
2021-05-10 Sayniska kombi...
Soo Koobid Ilaa 44.6% laga dhimay lambarkan qaaska ah Ku raaxayso qiimo dhimis dhan ilaa 33.5%! ) ee 7.25 euro iyada oo loo mahadcelinayo lambarka iibka kadib Microsoft Office 2019 Professional Plus (Furaha Furaha) ee 25.20 euro iyada oo ay ugu mahadcelineyso lambarka iibka kadib Windows 10 Pro + Mi
Sida loogu beddelo mawduucyada iftiinka iyo mugdiga ah ee Photoshop
Adobe Photoshop waxay ubaahantahay mawduuc mugdi ah marka ugu horeysa ee la rakibo, laakiin way fududahay in si deg deg ah loogu badalo mawduuc fudud (ama meel udhaxeysa) Windows iyo Mac. Jadwalka Mawduucyada: Sida loo dejiyo mawduuc iftiin ama mugdi ah iyada oo la adeegsanayo dookhyada Sidee loo de
Sida loo damiyo sawirada yar yar ee Safari ee Mac
Safari 14.0 iyo wixii ka dambeeya ee Mac, muuqaalka muuqaalka tab ayaa kuu oggolaanaya inaad eegto bogga adoo dulmaraya tilmaamahaaga tabta. Haddii aad tan ku dhibsato, waad damin kartaa adigoo isticmaalaya Terminal. Waa tan sida. Apple wuxuu ku darey muuqaalka horudhaca tab ee cusbooneysiinta macOS